Amagagasi okuvuthayo akhiwa njengamaqabunga kwisithuba sexesha kunye neenkqubo ezinamandla ezinjengeembalo ezimnyama ezikwindawo. Bekude becinga ukuba kwenzeke, kodwa izazi-physics zazingenayo ingxaki-ezaneleyo zokuzifumana. Oko konke kwatshintshwa ngo-2016 xa amaza okuvuthayo avela kudibaniso lweemingxuma ezimbini ezimnyama ezilinganayo. Kwakuyi-disco disco echazwe ngophando eyenziwe ekuqaleni kwekhulu lama-20 ngu-physicist Albert Einstein .
Ngo-1916, u-Einstein wayesebenza kwiingcamango zakhe zobudlelwane obubanzi . Omnye umsebenzi wakhe wawusisisombululo seendlela zakhe zokwabelana ngokubanzi (okubizwa ngokuba yi-equation). Ingxaki yayiyiyo, akukho mntu wafumanisa nayiphi na into enjalo. Ukuba babekhona, babeya kuba buthathaka kakhulu kangangokuthi bekungenakukwazi ukufumana, kodwa yodwa imilinganiselo. Iichysicists zachitha ikhulu lama-20 leminyaka ziceba iingcamango malunga nokubona amagagasi enamandla kunye nokukhangela iinkqubo kwindalo yonke eya kubadala.
Ukulinganisa Indlela Yokufumana Iifayile Zomlilo
Enye ingcamango enokwenzeka yokudalwa kwamagagasi okuvuthwa kwakucetyiswa ngabaososayensi uRussel Hulse noJoseph H. Taylor. Ngowe-1974, bafumene uhlobo olutsha lwe-pulsar, abafileyo, kodwa i-hulk ehamba ngokukhawuleza yobunzima basala emva kokufa kweenkwenkwezi enkulu. I-pulsar ngokwenene iyinkwenkwezi ye-neutron, ibhola le-neutron lichithwe kwibukhulu behlabathi elincinci, lijikeleza ngokukhawuleza kwaye lithumele i-pulses of radiation.
Ienkwenkwezi ze-Neutron zikhulu kakhulu kwaye zanikezela uhlobo lwezinto ezineenkalo ezinamandla ezinokuthi zibandakanyeke ekudalweni kwamagagasi okuvumba. Amadoda amabini aphumelela ngo-1993 iNobel Prize kwi-physics ngomsebenzi wabo, owawuchukumisa ngokubanzi kwiziganeko ze-Einstein esebenzisa amagagasi enamandla.
Ingcamango emva kokufunwa kwamagagasi anjalo ayilula: ukuba bekhona, ngoko izinto ezizithumelayo ziza kulahlekelwa ngamandla. Ukulahleka kwamandla kungabonakali ngqo. Ngokufunda izitshixo zeenkwenkwezi ze-neutron zobuncinci, ukubola okuqhubekayo kule mizila kuyakufuna ukuba kubekho amagagasi anokwenza amandla.
Ukufumaniswa kweMigodi yokuVikela
Ukuze ufumane amagagasi anjalo, ama-physicists ayedinga ukwakha i-detectors ezibuhlungu. E-US, bakha i-Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory (LIGO). Idibanisa idatha kwiindawo ezimbini, enye eHanford, eWashington enye enye e-Livingston, eLouisana. Ngamnye usebenzisa i-laser ibhentshi edibeneyo kwiimpahla ezichanekileyo ukulinganisa "i-wiggle" yomshumbisi onqabileyo njengoko idlula emhlabeni. I-lasers kwisixhobo ngasinye siyahamba ngeengalo ezahlukeneyo zekamelo lokucoca elide leekhilomitha ezine. Ukuba akukho zibane ezivuthayo ezichaphazela ukukhanya kwe-laser, iiplanga zokukhanya ziya kuba kwisigaba esipheleleyo omnye nomnye xa sifika kwi-detectors. Ukuba ngaba amagagasi anesibhakabhaka ayenayo kwaye anesiphumo kwiimitha zamatye, ezenza ukuba i-1/10 000 yebubanzi beproton, ibe yinto ebizwa ngokuthi "iipatheni zokuphazamiseka" iya kubangela.
Bakhombisa amandla kunye nexesha la maza.
Emva kweminyaka yokuvavanywa, ngoFebruwari 11, 2016, izazi-physics ezisebenza kunye neprogram ye-LIGO zamemezela ukuba zifumene amagagasi ezithintekayo kwiinkqubo ezinobunzima bemigodi emnyama ehamba kunye nezinye iinyanga eziliqela ngaphambili. Into emangalisayo kukuba i-LIGO yakwazi ukubona ngeendlela ezintle zokuziphatha eziye zenzeka ukukhanya-iminyaka. Iqondo lokuchaneka lalilingana nokulinganisa umgama kwenkwenkwezi esondeleyo kunye nomda wephutha ngaphantsi kobubanzi bentloko yabantu! Ukususela kulo xesha, kuye kwafumanisa amaninzi amaninzi, nakwindawo yesigxobhozo esimnyama.
Yintoni elandelayo kwiNzululwazi ye-Waving Gravity
Isizathu esikhulu sokonwaba ngenxa yokufunyanwa kwamagagasi okuvuthayo, ngaphandle kwesinye isiqinisekiso sokuthi u-Einstein inkolelo yokuxhatshazwa kuchanileyo, kukuba unika indlela eyongezelelweyo yokuhlola indalo.
Izazi zeenkwenkwezi ziyazi ngokubanzi njengoko zenzayo ngembali yendalo yonke namhlanje kuba zifunda izinto kwindawo kunye nazo zonke izixhobo ezikhoyo.Ukuze zifumane i-LIGO, umsebenzi wabo uvalelwe kwimimangaliso ye-cosmic kunye nokukhanya kwizinto ezibonakalayo, i-ultraviolet, ebonakalayo, , i-microwave, i-ray-ray kunye ne-gamma-ray ukukhanya. Kanye njengoko ukuveliswa kwerediyo kunye nezinye iilesikopu eziphambili zavumela i-astronomers ukuba zijonge kwindalo engaphandle kwendawo ebonakalayo ye-electromagnetic spectrum, oku kwangaphambili kunokuvumela iindidi ezintsha zeetelesiko eziza kuhlolisisa imbali yendalo yonke kwizinga elitsha .
I-Advanced LIGO yokujonga i-interferometer ye-laser-based-based, ngoko ke ukuhamba okulandelayo kwizifundo zokutshatyalaliswa kwamandla kukudala isithuba esisekelwe kwiindawo ezithintekayo. I-European Space Agency (i-ESA) yasungula kwaye yasebenzisa umyalelo we-LISA Pathfinder ukuvavanya amathuba okufumana ukutshatyalaliswa kweengcambu ezisekelwe kwiindawo ezizayo.
Nangona amagagasi ezithintekayo avunyelwe kwiingcamango ngokubanzi ngokubanzi, esinye sezizathu ezibangela ukuba izazi zefilosofi zinomdla kubo ngenxa yexabiso lokunyuka kwamaxabiso , elingazange liphinde libuye xa uHulse noTloron beqhuba uphando lwabo lwe-neutron yeNobel.
Ngama-1980, ubungqina beengcamango ezinkulu zeBang Bang bekuninzi kakhulu, kodwa kwakukho nemibuzo engenakukwazi ukuchaza ngokufanelekileyo. Ekuphenduleni, iqela le-physicists kunye ne-cosmologists basebenza kunye ekuphuhliseni i-theory yokunyuka kwamaxabiso. Bacetyisa ukuba ukuqala, i-compact universal (in-compact variation) yayiza kubakho ukuguquguquka kwamanani amaninzi (oko kukuthi, ukuguquguquka okanye "ukukhwaza" kwizikali ezincinane kakhulu).
Ukwandiswa ngokukhawuleza kwindalo yokuqala, enokuthi ichazwe ngenxa yengcinezelo yangaphandle yesikhala sendawo ngokwawo, yayiya kwandula ukuguquguquka kwee-quantum.
Esinye seziprofeto eziphambili kwi-theory yokunyuka kwamaxabiso kunye nokuguquguquka kwe-quantum kukuba izenzo ezisekuqaleni kwendalo zazivelisa amagagasi ezithintekayo. Ukuba oko kwenzeka, ngoko uvavanyo lwaloo mphazamiseko lwangaphambili luya kubonisa ulwazi oluninzi malunga nembali yokuqala yezulu. Uphando nophando lwexesha elizayo luya kuhlola ukuba kungenzeka.
Ingaba i-dureza i-extrema e-nuevo perdón y cómo se prueba?
Iingoma kunye nokuguqulelwa kweengoma zeDvorak "Iimvumi Mama Wandifundisa"